The Irrawaddy's Blog: ကာယကြံ့ခိုင်မှု ပြိုင်ပွဲ ( ရုပ်/သံ)
ကာယကြံ့ခိုင်မှု ပြိုင်ပွဲ ( ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်မှာ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကာယကြံ့ခိုင်မှု ပြိုင်ပွဲ ရုပ် /သံ မြင်ကွင်းဖြစ် ပါတယ်။တခေတ်တခါက ခေတ်စားခဲ့တာတွေ အခု ပြန်လည် ဆန်းသစ် လာခြင်းပါ။
တစ် ယောက်မှ မလှ ဘူးးခြေတိုင်တွေ တုတ်တယ်..ဒူးတွေ မလှ ဘူးး ပေါင်သားတွေ အဆီ များတယ်...လုံးဝ မလှပါ...ထမိန်ဝတ်ထားရင်တော့ မမြင်ရ လို့ လှတယ် ပြောမိမလားတော့ မသိ ဘူးးးအသားကပ် ပန်စ့် နဲ့ ဆိုတော့ တကယ်မလှတာတွေ ပေါ်လာပါတယ်..မမ တို့ ရယ်...
you are absolutely right!!!!!Their legs are so ugly.
Nobody exercised.. To become international standard, Burmese's girls should change lifestyle. Even celebrities, face are pretty, but with tummy and big leg.. but some still dare to ware short and took pictures... eeeeyy. :)
အဲ့လို ပြိုင်ပွဲ ၀င်တဲ့ မမတွေက ဘာကိုပြချင်တာလဲ။ သေသေချာချာကြည့်လေ တော်တော်ရွံစရာကောင်းလေလေးပဲ။ဒီပြိုင်ပွဲ တွေ က ဈေးခေါ်တဲ့  ပြိုင်ပွဲလို့ပဲ မြင်တယ်။ ဘာလိုမှကို ကြည့်လို့ မလှတညပါ။ ဘယ်လိုစိတ်ကူး စိတ်သန်းနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲလဲတော့မသိပါဘူး။ ဒီလို ပြိုင်ပွဲဝင် မမတွေလဲ အထင်ကြီးလေးစားမှုမရှိပါဘူး။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ဒီအရွယ်တွေတောင် ခြေသလုံး ပေါင်လုံးတွေ အဲဂလောက်တောင် အဆီရစ်နေရင် အသက်များ ကြီးလာရင်ဖြင့် ...
နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာ ဒီပေါင်တံတွေနဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးနော်။
နားလည်တဲ့ ဗမာက ပွဲကိုလုပ်တယ်။။ နားမလည်တဲ့ ဗမာတွေက အပြစ်ပြောတယ်။။ ကြာတော့လည်း okay မှာပါ။။
အားလုံးအပြစ်တင်မစောကြပါနဲ့။ သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းကြပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကာယကြံ့ခိုင်မှုကို ပြောတာပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပေါ့နော် :)